window shut down အရမ်းကြာတယ် — MYSTERY ZILLION
window shut down အရမ်းကြာတယ်
Window Shutdown လုပ်ရင် အရမး် ကြာတယ်........... Window တက်တာတောင် 20 စက္ကန့် လောက်ပဲကြာတယ်............. Shutdown လုပ်တာ 10 မိနစ်လောက်ကြာနေတယ်..........
ကျွန်တော့်စက်က CPU က P4 2.1 GHz, Mem 256MB, Window က window7(XP sp3)..
* တစ်ခုတော့ရှိတယ် ဆိုင်မဆိုင်တော့မသိဘူး.......... MB မှာ IDE Cable ကို slot2မှာ စိုက်ထားတယ်...........(ရွှေ့ရမှာ ပျင်းလို့......ဟီးဟီး.........):67:
win7ကတော့ တင်ပြီး သိပ်မသုံးဖြစ်သေးဘူးဗျ.. စက်ရဲ့ Specification ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ IDE ကို PCI ကဒ်မှာထည့်သုံးထားတာကိုပြောတာလား? Secondary IDE မှာ တပ်ထားတာကိုပြောတာလား? Primary, Secondary ကတော့ အရေးမကြီးပါဘူး။ Boot ရွေးတာ အဆင်ပြေရင်ပြီးတာပဲ။ သူမှာ getget တွေရဲ့ ဆားဗစ်ကတော့ များတယ်။ အဲ့ဒါတွေပိတ်တာတင် ကြာနေတာနေမှာ။ အဲ့ဒီ ဆားဗစ်တွေ ပိတ်ထားကြည့်ပြီးစမ်းကြည့်လိုက်ပါဦး။ MZ က အကိုများလည်း Windows7ရဲ့ အားနည်း/အားသာချက်များကို ဆွေးနွေးပေးကြပါဦး
window နဲ့ မဆိုင်ဘူးဗျ..............
theme မှာ ပြသနာရှိနေတာ.............Change လိုက်တာ Ok သွားပြီ..................
if u want to shutdown your computer within 10 sec..
run " taskmanager" and then go to shutdown menu in menu bar...
and u will find " turn off" . before click turn off u must press ur control key and togerther to click turn off